Abu Dhabi kana Dubai kuenda kuMelbourne nendege nhoroondo yenguva yacho
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Abu Dhabi kana Dubai kuenda kuMelbourne nendege nhoroondo yenguva yacho
Airlines • nhandare yendege • Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • UAE Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Melbourne iguta rinozivikanwa nekokorodzano, mafireworks uye nehupenyu hunoshanda. Kwete panguva ino. COVID-19 yakashandurawo guta iri reAustralia kuva dhorobha remweya.
Melbourne muVictoria, Australia iri mune yekuvhara-nyowani nyowani nekuda kweiyo nyowani Coronavirus kuputika
Ndege dzenyika dzese kuenda kuMelbourne, kusanganisira kubva kuUAE dzakamiswa
Australia Open Tennis Tournament ichaitika
Etihad Airways kubva kuAud Dhabi neEmirates kubva kuDubai vari kumisa nendege kuenda kuMelbourne, Australia mushure mekunge matanho matsva ekuvhara zvinhu aunzwa muAustralia State yeVictoria.
Zvese zveMelbourne yakakura, kusanganisira Melbourne Airport, yakaziviswa sekoronavirus inopisa nzvimbo. Hurumende yakapinda mukati memazuva mashanu kukiya kuti ipindure kuputika kweCovid-19 kwakabatana nehotera yeHoliday Inn Melbourne Airport. Ichi chiyero chakaiswa munzvimbo Chishanu.
Kutevera kuziviswa, Emirates neEtihad Airways vari kumisa ndege dzese dzevatengesi kubva kuDubai neAud Dhabi kuenda kuMelbourne. Kutangazve hakutarisirwe kusvika munaKurume.
Kuvharirwa kwemazuva mashanu kuchamisikidzwa mudunhu reVictoria kudzivirira hutachiona kutapukira kubva kuguta guru renyika, Mutungamiriri weVictorian Daniel Andrews akadaro.
Ndege dzekunze chete idzo dzaive dzatove mumhepo pakaziviswa kukiya dzichazobvumidzwa kumhara paMelbourne Airport. Zvikoro nemabhizinesi mazhinji zvichavharwa. Vagari vanorairwa kuti vagare pamba kunze kwekurovedza muviri uye nezvinangwa zvakakosha.
Mitambo yeAustralia Open tenesi ichabvumidzwa kuenderera asi pasina vaoni.